High Quality Drywall skru Manufacturer na Supplier | Yanzhao
Ihe nkedo akọrọ nke ejiri ahịhịa carbon ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara ejiri ya mee ihe maka ịkwado mgbidi na nkụ ma ọ bụ nke ọla. Ha nwere eri miri emi karịa ụdị kposara ndị ọzọ, nke nwere ike igbochi ha iwepu ngwa ngwa na drywall.
Ihe nkedo a na-eji eme ihe na-abụkarị isi kposara na spaced eri na isi ihe. Ekewaputara site na eriri nke eriri, enwere uzo abuo nke okpukpu kporo nku: ezi eri na eriri adighi nma.
Fine eri drywall kposara nwere nkọ ihe, nke na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịbanye. A na-ejikarị ha eme ihe mgbe ha na-etinye mgbidi na mgbidi na-acha ọkụ ọkụ.
Ihe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-enwe obere eri nke na-eme ka ha jidesie ike ma gbanye ya ngwa ngwa. A na-ejikarị ha eme ihe mgbe ha na-etinye mgbidi na akọrọ na osisi osisi.
E wezụga nke ahụ, a na-emepụta kposara nkụpu pụrụ iche maka ebumnuche ụfọdụ. Mgbe ị na-ekekọta mgbidi ahụ na-acha ọkụ ọkụ, ị ga - ahọrọ ihe nkedo na - egwupu onwe gị, ọ dịghị mkpa ị ga - egwu oghere.
Ka ọ dị ugbu a, enwere nkụkọ nkụ na-ekpuchi. Enwere ike iji ha na egbe ịghasa, nke na-agba ọsọ ngwa ngwa.
Ọzọkwa, e nwere ihe mkpuchi dị iche iche nke mgbidi nke nwere ike ichebe megide mmebi.
Ihe nkedo akọrọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka akọrọ akọrọ na ihe ndabere. nkụkọ nkụ na-enye ngwọta dị mma maka ụdị dị iche iche nke akọrọ.
A na-ejikarị eme ihe maka ịkwanye ogwe osisi akọrọ na metal ma ọ bụ osisi osisi, ihe nkụ na-eji eriri dị mma maka eriri ọla na nke na-adịghị mma maka osisi.
A na-ejikwa ya maka ihe mkpuchi ígwè na ngwaahịa osisi, ọkachasị maka mgbidi, uko ụlọ, ugha ụgha na nkebi.
Enwere ike iji ihe nkedo eji eme ihe pụrụ iche maka ihe eji eme ụlọ na ihe acoustics.
Black-oxide nchara kposara na-adị nwayọọ na-eguzogide ọgwụ na gburugburu akọrọ. Zinc-plated nchara kposara iguzogide corrosion na mmiri gburugburu. Black ultra-corrosion na-eguzogide ọgwụ na-ekpuchi kposara na-eguzogide kemịkal ma na-eguzogide awa 1,000 nke nnu ịgba.
Nkeji 4.8 5.2
Nkeji 8.14 8.14
b Nkeji 45 45
螺纹螺纹b - -
Osote: Hex kpọchie
Fine Eriri Ihe nkuku akuku
Ihe nkpuchi Phosphated Drywall
Black Oxidation Hex mkpọchi, Din6921 Flange Mkpụrụ, Nnukwu Ike Hex Bolts, Hegzagon Socket Head mkpọchi, Mkpọchi, Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi,